Jereo ny tombony azo amin'ny famandrihana dia mialoha | Vaovao momba ny dia
Tombontsoa amin'ny famandrihana dia mialoha
Susana Garcia | | soso-kevitra, General
Tokony handamina ny dia mahazo mialoha, na dia olona tsy mahay mandamina aza matetika dia mamela ny zava-drehetra amin'ny minitra farany. Na izany aza, misy antony vitsivitsy mety mahasoa kokoa ny manao famandrihana mialoha. Raha vao mikasa ny dianao ianao dia mety ho fampahalalana mahasoa izany.
Indraindray dia tsara kokoa ny mamandrika dia, fa hanana tombony maro koa isika raha raisina. Tsara ny mianatra misimisy kokoa planner rehefa mikasa ny dia, satria raha voalamina tsara ny zava-drehetra dia ho afaka hampiasa tsara kokoa ny fotoana isika. Nefa andao jerena mialoha ny tombony azo avy amin'ny famandrihana ity.
1 Ny tahiry lehibe
2 Mitadiava hotely tsara
3 Omano ny fitsidihana
4 Fetsy mahaliana sasany
Ny tahiry lehibe
Voaporofo izany mamandriha dia mialoha Tena mora vidy kokoa izy io, satria ny sidina dia manova ny vidiny arakaraka ny fitomboan'ny tinady. Zava-dehibe indrindra izany raha mikasa ny handeha amin'ny vanim-potoana lehibe isika, satria amin'ny minitra farany dia hiakatra amin'ny tampon-trano ny vidin'ny sidina sy ny hotely noho ny kely sisa tavela. Raha mizotra amin'ny toeran-kaleha manokana isika dia tsy maintsy mitady ilay dia eo anelanelan'ny roa sy enim-bolana mialoha. Ireo no daty tsara indrindra hahitana tolotra tsara. Ao anatin'ny Vondrona eropeana, roa volana mialoha dia mihoatra ny ampy. Ankoatr'izay, ny fanadihadiana dia natao mba hahalalana hoe iza no andro tsara indrindra ahazoana ny tapakila ary toa ny alahady izao. Na izany aza, ny andro mora vidina indrindra dia ny talata sy alarobia. Ny fomba tsara indrindra hitsitsiana dia ny mahita kely foana ny fivoaran'ny vidiny.
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hitehirizana rehefa mikasa ny dia tsy manana toeran-kaleha voafetra, satria misy ny fifanarahana tsy mampino na dia mijery azy amin'ny fotoana fohy aza isika. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy mamela sisiny isika handrafetana ireo antsipirihany, satria handeha any amin'ny toerana tsy fantatsika isika ary momba izay mbola tsy ananantsika fampahalalana.
Mitadiava hotely tsara
Raha mikasa mialoha ny dia isika, dia manangona amin'ny tapakilan'ny sidina, fa afaka mahita hotely tsara mialoha ihany koa. Mila fotoana hikarohana eo amin'ireo hotely izahay, jereo ny antsipiriany, ny sary ary ny hevitry ny mpampiasa, izay sarobidy satria afaka manazava ny zavatra tena ho hitantsika izy ireo rehefa tonga any amin'ny hotely. Ho fanampin'izay, afaka mangataka fampahalalana momba ny antsipiriany foana izahay, toy ny hoe mamela biby fiompy izy ireo na misy serivisy ilainay. Azontsika atao ihany koa ny mitady trano hafa hafa, toy ny trano fanofana na trano fandraisam-bahiny. Betsaka ny fampahalalana amin'ny Internet ary azo antoka fa mila fotoana handaminana azy io.
Omano ny fitsidihana
Raha mandehandeha mandritra ny andro vitsivitsy isika, dia tsy maintsy kasaina tsara izany. Mahazatra antsika ny manao dia lavitra nefa tsy fantatsika tsara izay ho hita sy handany fotoana be dia be hitady toerana na hijerena ny fomba hitodihana. Izany rehetra izany dia azo atao ary tokony kasaina mialoha hahafahana manararaotra isaky ny minitra raha vantany vao tonga any amin'ny toerana halehantsika. Zava-dehibe indrindra izany raha handeha tanàna izay be dia be ny mahita, toa an'i Roma na Londres, satria misy toerana maro hitsidihana ary fotoana kely dia kely raha manana andro vitsivitsy isika.
Mazava ho azy fa raha eny amoron-dranomasina ny toerana halehany dia handray zavatra milamina kokoa isika, saingy hanana zavatra ho hita sy làlana haleha foana. Tsy hoe variana loatra amin'ny drafitra ary mijery ny zava-drehetra amin'ny minitra, fa mila izany lisitra misy toerana mahaliana ary asehoy izy ireo mba tsy handany fotoana miala amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Raha voaomana mialoha ireo zavatra ireo dia mamonjy fotoana sy fitsidihana feno sy mahafa-po tokoa ny vokatra satria tsy fantatsika hoe rahoviana isika no afaka mitsidika an'io toerana io indray.
Fetsy mahaliana sasany
Mitadiava mahaliana fampiharana amin'ny dia mety ho tombony. Amin'ny sasany dia manao fampitahana vidiana tsara izy ireo ary mitady sidina amin'ny vidiny tsara indrindra, eny fa na dia ny fikirakirana ny fijanonana sy ny fanovana sidina aza. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia be dia be ny rindranasa natokana ho an'ny olona mandeha, mba hahafahantsika mijery ireo Apps ireo mialoha mba hampidina ireo izay mahasoa sy mahaliana antsika.
Araho amin'ny zotram-piaramanidina na pejy toa ny Famandrihana mitondra antsika foana ny fahafantarana ny tolotra. Indraindray misy sidina mora sy hotely fifanarahana izay azontsika araraotina. Ary koa, tsy ratsy ny fananana aingam-panahy rehefa mitady vaovao momba ireo toerana alehantsika.
Fafao ny cookies ary avereno ny router. Toa somary adala ity, fa ny tena izy dia mitahiry cookies ny pejy ary raha mijery be amin'ny toerana aleha ianao amin'ny resaka sidina na hotely dia ho hitanao fa isaky ny mitady azy indray ianao dia nitombo ny vidiny. Fetsy taloha efa fantatsika rehetra izany, ka tena ilaina ny mamafa izany alohan'ny hividianana ny tapakila farany hahazoana azy ireo amin'ny vidiny mety indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tombontsoa amin'ny famandrihana dia mialoha
www.dosviajando.com dia hoy izy:
Ny marina dia mety hisy dikany ny tahiry, mahamenatra fa amin'ny asa maro dia tsy mampandre antsika izy ireo mialoha mba hahafahany mijery ny zava-drehetra ara-potoana. lahatsoratra tena tsara.
Valio ny www.dosviajando.com
Ny Tilikambon'i Pisa